Matayos 24 oo ku saabsan dhamaadka, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Waxa Matayos 24 ka leedahay "dhammaadka"
Waa muhiim in laga fogaado tarjumaadaha khaldan, Matayos 24 macnaha guud (Kontext) der vorangegangenen Kapitel zu sehen. Vielleicht überrascht es Sie zu erfahren, dass die Vorgeschichte von Matthäus 24 spätestens schon im 16. Kapitel, Vers 21, beginnt. Dort heisst es summarisch: «Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen.» Damit gibt Jesus erste Fingerzeige auf etwas, das in den Augen der Jünger wie eine elementare Kraftprobe zwischen Jesus und der religiösen Obrigkeit in Jerusalem aussah. Auf dem Weg nach Jerusalem (20,17-19) wuu sii wadaa inuu u diyaar garoobo isku dhaca soo socda.
Xilliyadii ugu horreeyay ee lagu dhawaaqay silica, Ciise wuxuu kaxeeyey saddexdii xerta ahayd ee Butros, Yacquub iyo Yooxanaa ilaa buurtii sare. Halkaasna waxay ku arkeen beddelid (17,1-13). Sidaa darteed, xertii waa inay isweydiiyaan bal in dhismaha boqortooyada Ilaah uusan soo dhowayn (17,10-12).
Ciise wuxuu xertiisa u sii sheegayay inay ku fadhiisan doonaan laba iyo toban carshi oo ay xukumi doonaan Israa'iil "goorta Wiilka Aadanahu carshiga ammaantiisa ku fadhiisan doono" (19,28). Shaki la'aan, tani waxay mar kale kicisay su'aalo ku saabsan "goorta" iyo "sidee" imaatinka boqortooyada Ilaah. Hadalkii Ciise ee ku saabsanaa boqortooyada xitaa wuxuu ku kiciyay hooyadii Yacquub iyo Yooxanaa inay weydiisato Ciise inuu siiyo labadeeda wiil xilalka gaarka ah ee boqortooyada (20,20-21).
Dabadeedna waxaa soo galay magaalada Yeruusaalem, oo Ciise ugu galay dameer (21,1-11). Tan, sida ku xusan Matthew, waxay fulisay wax sii sheegiddii Sekaryaah oo loo arkay inuu la xiriiro Masiixa. Magaalada oo dhammuna cagaha ayay taagnaayeen, oo waxay ka yaabinayeen waxa dhici doona haddii Ciise yimaado. Yeruusaalem dhexdeeda ayuu afgembiyey miisaskii lacagta beddalay wuxuuna ku tusay awooddiisa Masiixiyiinta ficillada iyo mucjisooyinka dheeriga ah (21,12-27). Waa kuma? dadku way yaabeen (21,10).
Markaas 21,43 Ciise wuxuu sharraxay wadaaddada sare iyo waayeellada: "Sidaa darteed waxaan idinku leeyahay: Boqortooyada Ilaah waa lagaa qaadi doonaa, oo waxaa la siin doonaa dad midhihiisa dhala." Dhagaystayaashiisu way ogaadeen inuu ka hadlayo. Oraahda Ciise waxaa loo qaadan karaa inay daliil u tahay inuu ku dhowaaqi lahaa boqortooyadiisa Masiixa, laakiin in 'aasaaska diinta' waa in laga reebaa.
Boqortooyada ma la dhisi doonaa?
Xertii taas maqashay waa inay yaaban yihiin waxa dhici doona. Ciise miyuu doonayay inuu isla markiiba isu yeero Masiixa? Ma wuxuu la dagaallami lahaa maamulka Rome? Ma wuxuu soo waday boqortooyada Ilaah? Dagaal ma jiri lahaa, maxaase ku dhici doona Yeruusaalem iyo macbudka?
Hadda waxaan u nimid Matayos 22, aayadda 15aad. Halkaan waxaa laga bilaabaa Farrisiinta doonaya inay Ciise kudhagaan su'aalaha ku saabsan canshuurta. Jawaabahiisa waxay rabeen inay u bandhigaan inuu yahay fallaag ka soo horjeedda masuuliyiinta Roomaanka. Laakiin Ciise wuxuu u jawaabay xigmad iyo qorshihiina waa la carqaladeeyey.
Sadukiintu sidoo kale waxay la doodayeen Ciise isla maalintaas (22,23-32). Iyagu ma aysan rumaynin sarakicidda sidoo kale waxay weyddiiyeen su'aal khiyaano ah oo ku saabsan toddobo walaalo ah oo isla guursaday isla naag isku mid ah. Sarakiciddee bay naagtiisii ​​ahaan doontaa? Ciise si aan toos ahayn buu ugu jawaabay oo wuxuu yidhi ma ayna fahmin Qorniinka. Wuu ku wareeray isagoo dhahaya guurka Reich ma jirin.
Dabadeedna, Farrisiintii iyo Sadukiintii waxay weyddiiyeen su'aal ku saabsan sharciga ugu sarreeya sharciga (22,36). Wuxuu si xikmad leh ugu jawaabey isagoo soo xiganaya Laawiyiintii 3:19,18 iyo Sharciga Kunoqoshadiisa 5. Oo wuxuu ku jawaabay su'aal khiyaano leh oo ah: Masiixu waa inuu ahaado Masiixu? (22,42)? Markaa waxay ahayd inay aamusnaadaan; «Qofna eray kama jawaabi karo, qofna kuma dhicin inuu weyddiiyo maalintaas wixii ka dambeeya» (22,46).
Cutubka 23 wuxuu muujinayaa dhibaatadii Ciise ee ka dhanka ahayd culimmada iyo Farrisiinta. Dhamaadka cutubka, Ciise wuxuu ku dhawaaqay inuu u diri doono "nebiyo, iyo gabay, iyo culimmo" oo wuxuu saadaaliyay in ay dilayaan, iskutallaabta ku tuuri doonaan, furi doonaan oo silcin doonaan. Isagu wuxuu saaray masuuliyadii nebiyadii oo dhan oo lagu laayay garbihiisa. Xiisadda ayaa muuqata inay sii kordhayaan oo xertiina waa inay ka yaabiyeen muhiimada ay leedahay iska hor imaadyadaani. Ciise miyuu ku dhaqaaqi lahaa inuu xoog ku qaato sidii Masiixa?
Ciisena wuxuu kula tukaday Yeruusaalem salaadda wuxuuna sii sheegay in guryahooda "laga tegi doono cidla". Tan waxaa xigay hadalkii yaabka lahaa: "Waxaan kugu leeyahay, hadda ka dib ma arki doontaan ilaa aad tidhaahdaan: Mahad waxaa leh kan magaca Rabbiga ku imanaya." (23,38: 39.) Xertiisu waa inay ka yaabaan oo weydiiyeen su'aalo cabsi leh oo ku saabsan waxyaabihii Ciise yidhi. Miyuu ku dhowaaday inuu is sharraxo?
Burburka macbudku wuxuu sii sheegay
Intaa ka dib, Ciisena macbudka ayuu ka tegey. Markuu baxay, xertiisii ​​neefsatay ayaa tilmaamayay dhismayaashii macbudka. Markus waxay yiraahdaan: "Macallimow, arag dhagaxyada iyo dhismayaashaas!" (13,1). Luukos wuxuu qoray in xertii ay si layaab leh uga hadashay "dhagaxyadiisa qurxoon iyo dahabka" (21,5).
Ka fikir waxa ku sii socday qalbiga xerta. Hadalladii Ciise ee ku saabsan burburka Yeruusaalem iyo isku dhacyadii uu la kulmay mas'uuliyiinta diinta ayaa cabsi geliyey oo farxad gelisay xertii. Waa inaad la yaabeysaa sababta uu uga hadlay hoos u dhaca ku yimid diinta Yahuudda iyo machadyadeeda. Miyayna ahayn Masiixu inuu u imanayo inuu labada xoojiyo? Erayada xerta ee ku saabsan macbudka waxa ku jira walaac aan toos ahayn: miyaanay ahayn kaniisaddan xoogga badan inay sidoo kale waxyeello gaarsiiso?
Ciise wuu burin doonaa rajadooda wuxuuna sii adkayn doonaa cabsidooda. Ammaantii macbudka wuu ka fogeeyey, oo miyaydnaan waxyaalahan oo dhan arag? Runtii waxaan idinku leeyahay, Halkan lagu dul dayn maayo dhagax dhagax kale dushiisa oo aan la dumin doonin. (24,2). Tani waa inay xertii cabsi gelisay. Waxay rumeysan yihiin in Masiixu badbaadin doono Yeruusaalem iyo macbudka, ma baabiin doono. Markuu Ciise waxyaalahaas ka hadlay, xertiisu waa inay ka fekeraan dhamaadka xukunkii jaahilka iyo sarakiciddii ammaanta reer binu Israa'iil; Labadaba waxaa marar badan lagu sii sheegay kitaabka Cibraaniga. Waxay ogaayeen in dhacdooyinkaani inay dhacaan "waqtiga dhamaadka", "waqtiga ugu dambeeya" (Daanyeel 8,17; 11,35 iyo 40; 12,4 iyo 9). Markaas Masiixa waa inuu u muuqdaa ama "yimaadaa" si uu u dhiso boqortooyada Ilaah. Taas macnaheedu waxa weeye in reer binu Israa’iil ay kor u sii kici doonaan cabirkooda qaran isla markaana noqon doonaan madaxa ugu weyn ee boqortooyada.
Goorma ayaa taasi dhici doontaa?
Xertiisii ​​- oo u arkaayay Ciise inuu yahay Masiixa - ayaa si dabiici ah loogu booriyay inay ogaadaan bal in “wakhtigii dhammaadka” ay hadda yimaadeen iyo in kale. Waxaa jiray filashooyin sare oo ah in Ciise uu dhowaan sheegi doono inuu isagu yahay Masiixa (Yooxanaa 2,12-18). La yaab ma laha markaa xertii waxay ku booriyeen Master inuu sharaxo sida iyo goorta uu "yimid".
Markuu Ciise ku fadhiyey Buurta Saytuun, xertii xiisaha badneyd ayaa u timid oo waxay dooneyeen macluumaad "sixi" qarsoodi ah. Oo waxay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen, Noo sheeg, goorma markay sidan tahay? Calaamadu maxay ahaan doontaa wakhtiga imaatinkaaga iyo dhammaadka wakhtiga dunidu? (Matayos 24,3.) Waxay rabeen inay ogaadaan goorta waxyaabihii Ciise ku sii sheegay wax ku saabsan Yeruusaalem ay dhici doonaan, maxaa yeelay shaki la'aan waxay la xiriireen waqtiyada dhamaadka iyo imaatinkiisa.
Markii xertii ay ka hadashay "imaatinka", ma lahayn wax "labaad" soo gala maskaxda. Marka loo eego fikradooda, Masiixu waa inuu yimaadaa oo uu dhakhso ugu dhisaa boqortooyadiisa Yeruusaalem, waana inay ahaataa "weligeed". Iyagu ma ay yaqaaniin kala qeybinta imaatinka "kii ugu horreeyay" iyo kan "labaad".
Mawduuc kale oo muhiim ah in laga fiirsado ee Matayos 24,3: 24, maxaa yeelay aayaddu waa nooc ka kooban soo koobitaanka cutubka oo dhan. Su'aasha xertii waa in lagu celiyo oo dhowr erey oo muhiim ah ayay ku qornayd: taasi dhacdo? Calaamadu maxay ahaan doontaa wakhtiga imaatinkaaga iyo dhammaadka wakhtiga dunidu? Waxay rabeen inay ogaadaan goorta waxyaalihii Ciise ku sii sheegay wax ku saabsan Yeruusaalem markay ahaanayaan sababta oo ah waxay ku xidheen "dhammaadka dunida" (Sida saxda ah: dhamaadka waqtiga adduunka, marxaladda) iyo «imaatinkiisa».
Saddex su'aalood oo xertii ka timid
Saddex su'aalood ayaa xertii ka soo baxday. Marka hore, waxay rabeen inay ogaadaan goorta "taasi" ay tahay inay dhacaan. “Taasi” waxay la macno noqon kartaa burburka Yeruusaalem iyo macbudkii uu Ciise sii sheegay wax burburintiisa. Marka labaad, waxay doonayeen inay ogaadaan "calaamad" oo ku dhawaaqi doonta imaatinkeeda; Ciise goor dambe ayuu u yeerayaa, sida aan ku arki doonno, cutubka 24aad, aayadda 30aad. Tan saddexaadna, xertii waxay rabeen inay ogaadaan goorta "dhamaadka". Ciise wuxuu u sheegay inaysan u malayneyn inay tan ogaadaan (24,36).
Haddii aan si gaar ah u eegno seddexdaan su'aalood - iyo jawaabaha Ciise ee iyaga - waxaan badbaadin doonaa nafteena taxane dhan dhibaatooyin iyo marin-habaabin la xiriira Matayos 24. Ciise wuxuu xertiisii ​​ku yidhi, Yeruusaalem iyo macbudkii ("ah") runtii waa la burburin doonaa inta ay noolyihiin. Laakiin "calaamadda" ay codsadeen waxay la xiriirtaa imaatinkiisa, ma ahan burburka magaalada. Su'aasha saddexaadna wuxuu uga jawaabayaa inaysan cidina ogeyn saacadda uu laabanayo iyo "dhammaadka" waqtiga adduunka.
Markaa saddex su'aalood oo ku yaal Matayos 24 iyo saddex jawaabood oo kala duwan oo Ciise bixiyo. Jawaabahani waxay soo bandhigaan dhacdooyin qurux badan oo sameysmaya unug su'aalaha xerta oo jaray xiriirkooda ku meel gaarka ah. Soo laabashada Ciise iyo "dhammaadka wakhtiga dunidu" weli waa sii jiri karaan mustaqbalka, in kasta oo burburkii Yeruusaalem (70 AD) aad ayuu u soo laaban yahay.
Sidii aan idhi, tani macnaheedu maahan in xertu u arkeen burburka Yeruusaalem oo ka duwan “dhamaadka”. Ku dhawaad ​​waligood saas ma aysan yeelin. Waxay kaloo filayeen in dhacdooyinku dhowaan dhici doonaan (Fiqiga fiqi ahaan waxay leeyihiin ereyga farsamada "filasho deg deg ah").
Aynu aragno sida su'aalahan loogala hadlay Matthew 24. Ugu horreyn, waxaan ogaanay in Ciise sida muuqata uusan dan gaar ah ka lahayn ka hadalka xaaladaha "dhamaadka". Waa xertiisii ​​kuwa wax qodaya, kuwa su'aalaha waydiiya, oo Ciise ka jawaabaya iyaga oo sharraxaad ka bixinaya.
Waxaan sidoo kale aqoonsannahay in su'aalaha xerta ee ku saabsan "dhammaadka" ay u badan tahay inay ku saleysan yihiin khiyaano - in dhacdooyinku ay dhowaan dhici doonaan, iyo isla waqtigaas. La yaab maahan, inay filayeen inuu Ciise yimaado Masiixa mustaqbalka dhow, iyada oo loo maleynayo inay ku dhici karto maalmo ama toddobaadyo. Si kastaba ha noqotee, waxay rabeen "calaamad la taaban karo" oo ku saabsan imaatinkiisa si loo xaqiijiyo. Iyaga oo bilaabaya ama aqoon qarsoon, waxay rabeen inay naftooda geliyaan jagooyin faa'iido leh markuu Ciise talaabadiisa qaaday.
Macnaha guud, waa inaan aragnaa hadalada Ciise ee ka yimid Matayos 24. Dooddu waxaa bilaabma xerta. Waxay rumeysan yihiin inuu Ciise isku diyaarinayo inuu xukunka qabsado oo uu doonayo inuu ogaado "goorta". Waxaad ubaahantahay calaamad diyaarin. Markay sidaa samaynayeen, waxay si buuxda u fahmeen hadafka Ciise.
Halkii uu uga jawaabi lahaa su'aalaha xerta si toos ah sidii la rabay, Ciise wuxuu fursad u siinayaa inuu baro saddex waxbaris oo muhiim ah.
Muuqaalka ay waydiisanayeen way ka sii dhib badnaayeen xerta roonaanta.
Markuu Ciise "imaan lahaa" - ama sidii aan oran lahayn: "soo noqo" - iyaga uma aysan aheyn inay ogaadaan.
Xertiisu waa inay "daawadaan", haa, laakiin waa inay isha ku hayaan xiriirkooda Ilaah iyo inay ka yaraadaan dhacdooyinka maxalliga ah ama adduunka. Adoo tixgalinaya mabaadi'da iyo doodii hore, waxaa hadda la muujiyey sida wada hadalka Ciise iyo xertiisii ​​u koray. Ugu horreyntii, wuxuu uga digayaa inaysan khiyaanayn dhacdooyinka u ekaan kara dhacdooyinka dhammaadka-waqtiga laakiin aan ahayn (24, 4-8). Musiibo iyo masiibo «waa inay dhacaan», «laakiin dhamaadka ma aha weli» (Aayadda 6).
Markaas Ciise wuxuu ku dhawaaqay xertii, fowdo iyo dhimasho xertii (24,9-13). Sidee ayey cabsi ugu noqotay iyaga! "Waa maxay hadalkan cadaadis iyo dhimashada ku saabsan?" waa inaad ka fikirtay. Masiixiyiinta Masiixiyiintu waa inay guuleystaan ​​oo guuleystaan, oo aan la gawracin oo halaagin, ayay u maleeyeen.
Markaas Ciise wuxuu bilaabay inuu ka hadlo ku saabsan ku dhawaaqa injiilka ee dunida oo dhan. Markaas dhammaadku waa inuu yimaadaa (24,14). Tani sidoo kale waa inay jahwareer geliyaan xertii. Waxay u maleynayeen in Masiixu "ugu horrayn" imaan doono, ka dibna wuxuu dhisi doonaa boqortooyadiisa, oo kaliya markaa ereyga Rabbiga ayaa dunida u soo bixi doona (Ishacyaah 2,1: 4).
Marka xigta, Ciise wuxuu umuuqdaa inuu soo jeestay oo haddana kahadlay burburka macbudka. Waa inay jirtaa "karaahiyo wasakh ah oo meesha quduuska ah" iyo "ka dibna u cararo buuraha ku yaal Yahuudiya" (Matayos 24,15: 16). Argagixiso aan kala go ’lahayn ayaa la sheegay inay ku faafayso Yuhuudda. "Sababtoo ah markaa waxay noqon doontaa dhibaato weyn oo aan tan iyo dunida bilowgeedii ilaa hadda soo noqonayn oo mar dambe soo noqon doonta," ayuu yidhi Ciise (24,21). Waa inay noqotaa mid aad u xun in qofna noolaan lahaa haddii maalmahan aan la gaabin.
In kasta oo ereyada Ciise ay sidoo kale leeyihiin aragti caalami ah, wuxuu inta badan ka hadlayaa dhacdooyinka ka dhacay Yahuudiya iyo Yeruusaalem. "Sababtoo ah waxaa jiraya dhibaato weyn oo dalka ka jirta iyo cadho dadkan," ayuu yidhi Luke, oo sharraxaya macnaha Ciise wuxuu yiri (Luukos 21,23, Elberfeld Bible, adkeynta tifaftirayaasha). Macbudka, Yeruusaalem iyo Yahuuddu waa udub dhexaadka digniinta Ciise, ma aha adduunka oo dhan. Digniinta apocalypt-ka ee Ciise ku dhawaaqday wuxuu ugu horeyntii ka hadlaysaa Yuhuudda ku sugan Yeruusaalem iyo Yahuudiya. Dhacdooyinka laga soo bilaabo AD 66-70. ayaa xaqiijiyay taas.
Ka carara - maalinta sabtida?
Sidaa darteed la yaab maahan in Ciise yiri: «Laakiin weydii in duullimaadkiinna aan la qaban xilliga qaboobaha ama sabtida» (Matayos 24,20). Qaar baa isweydiiya: Muxuu Ciise ugu magac daray Sabtida marka sabtidu aaney kaniisadda ku xirneyn? Maaddaama Masiixiyiintu ayan mar dambe ka welwelsanayn sabtida, maxaa haddaba si gaar ah loogu xusay halkan inay tahay caqabad? Yuhuuddu waxay rumeysan yihiin in safarka sabtida la mamnuucay. Waxay u muuqdaan xitaa inay leeyihiin qiyaas masaafada ugu dheer ee dabooli kara maalintaas, oo ah “Socodka Sabtida” (Falimaha Rasuullada 1,12). Dhanka Lukas, tani waxay u dhigantaa masaafada u dhexeysa Buur Saytuun iyo badhtamaha magaalada (Sida ku xusan lifaaqa buugga Luther Bible wuxuu ahaa 2000 dhudhun, qiyaastii 1 kiiloo mitir). Laakiin Ciise wuxuu leeyahay waa lagama maarmaan in loo cararo buuraha. "Sabti socod" ma ka kaxaynayso aagga qatarta. Ciise wuu ogyahay in dhagaystayaashiisu rumeysan yihiin inaysan sabtida qaadi karin jidad baxsad dheer.
Tani waxay sharraxaysaa sababta uu xertiisii ​​u weydiisanayo inay weydiiyaan in duullimaadku uusan ku dhicin Sabtida. Codsigan waa in lagu arkaa macnaha guud ee fahamkooda sharciga Muuse waqtigaas. Waxaan si kooban ugu soo koobi karnaa sababihii Ciise sidaan: Waan ogahay inaadan rumeysan safarada dheer ee sabtida, mana aad yeeli doontid sababtoo ah waxaad rumeysan tahay inuu sharcigu u baahan yahay. Haddaba waxyaalaha sabtida Yeruusaalem ku dhaca haddii ay dhacdo sabtida ma baxsan doontid oo waad dhiman doontaa. Marka waxaan kugula talinayaa inaad u duceyso inaadan u cararin sabtida. Sababtoo ah xitaa haddii ay go'aansadaan inay cararaan, xayiraadaha safarka ee guud ahaan ka jiray dunida Yuhuudda waxay ahaayeen carqalad adag.
Sidii aan idhi, waxaan u sheegi karnaa qaybtaan digniinaha Ciise burburkii Yeruusaalem ee dhacay 70. Masiixiyiinta Yuhuudda ee Yeruusaalem oo weli dhawra sharciga Muuse (Falimaha Rasuullada 21,17: 26) way saameynaysaa waana ay carari lahayd. Waxay ku imaan karaan khilaaf xagga damiirka ah sharciga Sabtida haddii duruufaha u baahdaan laga baxsado maalintaas.
Weli ma aha "calaamadda"
Dhanka kale, Ciise wuxuu sii waday khudbaddiisa, oo loogu talo galay inuu kaga jawaabo saddexdiisa su'aalood ee xertiisu ku saabsan tahay "goorta" imaatinkiisa. Waxaan ogaanay in ilaa iyo hadda uu u sharxay kaliya mabda'a goorta uusan imaan doonin. Waxay kala soocday masiibada ku soo dhici doonta Yeruusaalem "calaamadda" iyo imaatinka "dhamaadka". Halkaa markan laga joogo xertu waa inay rumaysteen burburka Yeruusaalem iyo Yahuudiya ay ahayd “calaamada” ay raadinayeen. Laakiin iyagu way qaldameen, oo Ciise wuxuu tilmaamay qaladkooda. Wuxuu yidhi: «Haddii qof idinku yidhaahdo, Bal eeg, waa kan Masiixa ah! ama waxaa jira !, waa inaadan rumeysneyn » (Matayos 24,23). Ma rumaysan? Maxay xerta xantu ku fikirtaa? Waa inaad adigu naftaada wayddiiso: Waxaan kaa codsaneynaa jawaab ah goorta uu boqortooyadiisa dhisi doono, waxaan ka baryeynaa inuu noogu yeero calaamad, oo wuxuu ka hadlaa oo keliya goorta ugudambaysta uusan imaanaynin oo uu magacyo waxyaalahan umuuqdaan calaamada laakiin ma ahan.
Si kastaba ha noqotee, Ciise wuxuu sii wadaa inuu xertiisii ​​u sheego goorta uusan imaanaynin, ma muuqan doono. Haddaba hadday idinku yidhaahdaan, Bal eega, wuxuu joogaa cidlada, ha u bixina. bal eeg, isagu guriga buu joogaa, ha rumaysanina » (24,26). Wuxuu doonayaa inuu caddeeyo in xertii yaan la marin habaabiyo, ama dhacdooyinka adduunka ama dadka u malaynaya inay og yihiin calaamada dhammaadka inay timid. Waxaa laga yaabaa xitaa inuu doonayo inuu u sheego in dhicitaanka Yeruusaalem iyo macbudku uusan weli ku dhawaaqin “dhamaadka”.
Haddaba aayadda 29aad Halkan Ciise wuxuu bilaabayaa inuu ugu dambeyntii xertiisa u sheego wax ku saabsan “calaamada” imaatinkiisa, taasi waa, wuxuu ka jawaabayaa su'aashooda labaad. Qorraxda iyo dayaxuna inay madowyihiin, iyo «xiddigaha» (malaha cometer ama meteorites) ayaa la sheegay inay cirka ka soo dhacday. Nidaamka qoraxda oo dhami waa inuu ruxaa.
Ugu dambeyntiina, Ciise wuxuu xertiisii ​​ugu yeedhay "calaamada" ay sugayaan. Wuxuu yidhi: «Dabadeedna calaamada Wiilka Aadanaha ayaa ka muuqan doona cirka. Oo markaasaa nimankii dhulka fadhiyey oo barooran doona, oo waxay arki doonaan Wiilka Aadanaha oo daruuraha cirka ku imanaya isagoo leh xoog weyn iyo ammaan. (24,30). Markaasaa Ciise wuxuu xertiisii ​​weyddiiyey inay masaal wax ka bartaan geed berde ah (24,32-34). Sida ugu dhakhsaha badan ee ay laamihu u jilcaan oo caleemaha u qulqulaan, waad ogtahay in xagaaga soo socda «Sidoo kale sidoo kale: haddii aad aragto waxaas oo dhan, ogaada inuu u dhowyahay albaabka» (24,33).
Intaas oo dhan
Kahor intaanan ka jawaabin, xoogaa yar oo dheefshiir ah, oo ah wax laga filayo kaniisadda rasuulnimada inay wax ka barato oo ku saabsan waxa ay injiillada synoptikku sheegaan. Burburkii Yeruusaalem 70, burburka macbudka iyo dhimashada wadaado badan oo yuhuud ah iyo afhayeenno (iyo sidoo kale rasuullada qaarkood) waa inay si adag ugu garaaceen kaniisadda. Waxay u dhowdahay inay kaniisaddu aamintay inuu Ciise isla markiiba soo laaban doono dhacdooyinkaas ka dib. Laakiin wuu iska fogeeyay, taasna waa inay ku kalliftay qaar Masiixiyiin ah.
Hadda, dabcan, Injiillada waxay ina tusinayaan in waxbadan oo ay tahay in la qabto ama la sameeyo kahor soo laabashada Ciise uusan aheyn kaliya burburka Yeruusaalem iyo macbudka. Laga soo bilaabo maqnaashadii Ciise ka dib dhiciddii Yeruusaalem, Kaniisad ma aysan soo gabagabeyn karin in la marin habaabiyay. Dhamaan sedexda joqoraafiga waxay ku celceliyaan waxbariddii loogu talagalay kaniisadda: ilaa aad ka aragto "calaamada" Wiilka Aadanaha oo jannada ka soo muuqanaya, ha dhegaysanina kuwa dhahaya inuu hore u yimid ama uu dhowaan iman doono.
Cidina ma oga saacadda
Hadda waxaan u nimid farriinta asaasiga ah ee Ciise doonayo inuu u gudbiyo wada hadalka ee Matthew 24. Ereyadiisa ku jirta Matayos 24 waa wax sii sheegid ah, ee waa qoraal barasho oo ku saabsan nolosha Christian. Matayos 24 waa digniinta Ciise ee xertii: Markasta diyaar ahaadaw ruux ahaaneed diyaar ahaw, si sax ah maxaa yeelay adigu garan maysid oo waad ogaan kartaa goorta aan soo noqon doono. Maahmaahyadii Matayos 25 ayaa muujinaya isla fariin asaasi ah. Aqbalida tan - in waqtigu yahay mid aan la garaneynin oo weli sii jira - wuxuu daaha ka qaadayaa isfaham-darrooyin badan oo ku saabsan Mat 24-kii hal istaroog. Cutubka ayaa sheegaya in Ciise uusan dooneynin inuu wax ka sii sheego wax ku saabsan waqtiga saxda ah ee "dhamaadka" ama soo laabashadiisa. "Saacadu" waxay ka dhigan tahay: inaad si joogto ah maskax ahaan u soo jeedo, had iyo jeer diyaar u ahaato. Mana aha: la soco dhacdooyinka adduunka. A "marka" wax sii sheegidda lama bixinin.
Sida lagu arki karo taariikh dambe, Yeruusaalem runti waxay ahayd isha ugu muhiimsan ee dhacdooyinka jahwareerka badan iyo horumarka. Sanadkii 1099, tusaale ahaan, jabhaddii Kirishtaanka waxay hareereeyeen magaalada oo dileen dhamaan dadkii deganaa. Intii lagu jiray Dagaalkii Koowaad ee Adduunka, Jeneraalkii Ingriisiga Allenby ayaa la wareegey magaalada oo ka saaray Boqortooyadii Turkiga. Maantana, sida aan wada ognahay, Yeruusaalem iyo Yahuudiya waxay ka ciyaaraan door dhexe khilaafka Yuhuudda iyo Carab.
Soo koobid: Markii xertii wax laga waydiiyey "goorta" dhamaadka, Ciise wuxuu ku jawaabayaa: "Ma garan kartaan taas." Caddayn in ay ahayd oo ay u muuqatay wax adag in la dheefshiido. Sarakiciddiisa ka dib, xertii waxay wali ku sii riixeen su'aalo kusaabsan: "Sayidow, miyaad boqortooyada reer binu Israa'iil u dhisi doontaa waqtigan?" (Falimaha Rasuullada 1,6). Haddana Ciise wuxuu ku jawaabayaa: "Xaq uma lihid inaad ogaatid saacadda ama saacadda uu Aabbuhu go'aamiyay awoodiisa ..." (Aayadda 7).
In kasta oo waxbarista cad ee Ciise, Masiixiyiintu ay ku celcelinayeen khaladaadka rasuulladu wakhti kasta. Ku soo noqnoqosho iyo soo noqnoodno ku sahabsan waqtiga "dhammaadka" la soo uruuriyay, ayaa haddana iyo mar labaad imaatinka Ciise si dhaqso ah loo sii saadaaliyay. Laakiin taariikhdu Ciise ayaa ka dhigtay mid sax ah oo khalad ka ah qof kasta oo tahriibiya. Kaliya si fudud: ma garan karno goorta “dhammaadka” uu imaan doono.
Maxaan samaynaa hadda inta aan sugno inuu Ciise soo laabto? Ciise wuxuu uga jawaabayaa xertii, jawaabtuna sidoo kale annaguna way khusaysaa. Wuxuu yiri: “Haddaba iska jir; maxaa yeelay garan maysid maalinta Eebahaa kuu imanayo ... Markaad adigu diyaar u tahay sidoo kale! Maxaa yeelay, Wiilka Aadanahu wuxuu imanayaa saacad aadan u jeedin » (Matayos 24,42: 44). Ka feejignaanta dareenka "daawashada dhacdooyinka adduunka" halkan looma jeedin. “Daawashada” waxaa loola jeedaa xiriirka Masiixiyiinta iyo Ilaah. Waa inuu had iyo jeer diyaar u yahay inuu wajaho hal-abuurkiisa.
Inta ka hartay Cutubka 24 iyo Cutubka 25, Ciise wuxuu markaa sharraxayaa waxa loola jeedo “ilaaliyayaasha”. Masaalka ku saabsan aaminka iyo addoonka xun, wuxuu xertiisu ku dhiirrigelinayaa inay ka fogaadaan dembiyada adduunyada oo ayan ku badin soo jiidashada dembiga (24,45-51). Akhlaaqda? Ciise wuxuu yidhi sayidkii addoonka xun wuxuu "u imaan doonaa maalin uusan filayn iyo saacad uusan ogayn" (24,50).
Barida la mid ah waxaa lagu muujiyey tusaalaha bikradaha caqliga iyo nacasyada (25,1-25). Qaar ka mid ah bikradihii hore diyaar ma aha, "ma soo jeedaan" markii aroosku yimaado. Waa lagaa saaray boqortooyadii. Akhlaaqda? Ciise wuxuu yidhi: "Haddaba soo jeeda! Sababta oo ah ma ogid maalin iyo saacad midna (25,13). Masaalkii ku saabsan soo galootiga aaminka ah, Ciise wuxuu ka hadlayaa naftiisa sidii qof safar ku socda (25,14-30). Waxay u badan tahay inuu ka fikirayo joogitaankiisa jannada kahor soo laabashadiisa. Addoomadu hadda waa inay maareeyaan ku aaminay gacmaha aaminka ah.
Ugu dambayntiina, maahmaahda idaha iyo riyaha, Ciise wuxuu ka hadlayaa waajibaadka xoolo-dhaqatada ee la siiyay xertii muddadii uu maqnaa. Halkan wuxuu kahelaa dareenkeeda "goorta" ee imaatinkiisa cawaaqibka imaatinkaani u leeyahay nolosheeda weligeed ah. Imaatinkiisa iyo sarakicistiisa ayaa la sheegay inay yihiin maalinta xukunkooda. Waa maalintii Ciise idihii (Ku xigeenadiisa dhabta ah) oo ka soo jeeda riyaha (Adhijirka xun) ayaa kala go '.
Masaalka masaakiinta, Ciise wuxuu la shaqeeyaa astaamo ku saleysan baahiyaha jirka ee xerta. Waxay siiyeen cunto markii uu gaajoodo, waxay siiyeen cabniin markii uu harraadsan yahay, waxay qabteen markii uu qariib ahaa, oo waxay huwiyeen markuu qaawanaa. Xertiisii ​​ayaa yaabtay oo waxay yidhaahdeen weligood ma arkin isaga inuu yahay qof baahan.
Laakiin Ciise wuxuu doonayey inuu caddeeyo wanaagga adhijirrada. «Runtii, waxaan idinku leeyahay: Waxaad ku sameysay mid ka mid ah walaalahaygan ugu yaryar, aniga ayaad igu sameysay» (25,40). Waa kuma walaalkii Ciise Mid ka mid ah ku xigeenadiisa dhabta ah. Sidaa darteed Ciise wuxuu xertiisii ​​ku amrayaa inay noqdaan wakiillo wanaagsan oo adhijir u ah adhigiisa - kaniisadiisa.
Tani waa sida sheekada dheer ee Ciise uga jawaabayo saddexda su'aalood ee xertiisu dhammaato: Goormay Yeruusaalem iyo macbudka duminayaan? Waa maxay “calaamadda” imaatinkiisa? Goorma ayuu dhacayaa “dhammaadka wakhtiga dunidu”?
Xertiii way yaabeen markay maqleen in dhismayaashii macbudka dumin lahaa. Waxay isweydiinayaan goorta ay tani dhici karto iyo goorta "dhammaadka" iyo Ciise "Imaatinka" ay dhici doonaan. Sidii aan idhi, suurtagalnimada waxay filayaan in Ciise uu carshiga Masiixa ku kaco oo boqortooyada Ilaah ha ku bilowdo xooggiisa iyo ammaantiisa oo dhan. Ciise wuxuu ka digayaa qaabkan fikirka. Waxaa jiri doona daahitaan kahor “dhamaadka”. Yeruusaalem iyo macbudka waa la wada dumin doonaa, laakiin nolosha kiniisaddu waa sii socon doontaa. Cadaadiska Masiixiyiinta iyo dhibaatooyin aad u daran ayaa ka soo bixi doona Yahuudiya. Xertii waa yaabeen. Waxay u maleeyeen in xertii Masiixa ay ku guuleysan doonto guul deg deg ah, in Dhulkii Ballanqaadka laga adkaan doono, in cibaadada runta la soo celiyo. Haddana saadaashaas burburka macbudka iyo silcin kuwa aaminka ah. Laakiin waxaa jira casharo kale oo naxdin leh oo soo socda. “Calaamadda” kaliya ee xertii imaatinkiisii ​​arki doonaan waa imaatinkiisa laftiisa. “Calaamadan” mar dambe ma leh howl ilaalin ah maxaa yeelay waa goor dambe. Dhammaan arrimahan oo dhammi waxay u horseedaan farriinta asaasiga ah ee Ciise in qofna aan saadaalin karin goorta “dhammaadka” uu imaan doono ama goorta Ciise soo noqon doono.
Ciise wuxuu qaatay walaacii beenta ee xertiisii ​​wuxuuna ka qaatay barida ruuxiga ah. Erayadii DA Carson: “Su'aalaha xertiisii ​​waa laga jawaabaa, oo akhristaha waxaa lagu dhiirrigelinayaa inuu sugo soo laabashada Rabbiga oo uu ugu noolaado si mas'uuliyad leh, aamin ah, bini-aadamnimo iyo dhiiranaan intaba. (24,45-25,46) » (ibid., p. 495).